Gabadha Ay Dhashay Ilhaan Cumar Oo Farriin Culus U Dirtay Madaxweyne Trump – somalilandtoday.com
Gabadha Ay Dhashay Ilhaan Cumar Oo Farriin Culus U Dirtay Madaxweyne Trump
(SLT-New York)-Gabadha ay dhashay Ilhaan Cumar ee lagu magacaabo Isra Xirsi ayaa sheegtay in ay codkeeda u dhiiban doonto sidii Trump xafiiska looga saari lahaa haddii maamulkiisa uusan qaadin tallaabo xal u ah “dhibaatada wayn” ee isbedelka cimilada adduunka.
Isra oo ayaa wax laga weydiiyay farriintan arrintan cimilada la xidhiidha ee ay u direyso Donald Trump ayaa sheegtay “in ayna dib uga istaageyn wax qabad la’aan”.
“Madaxweyne Trump, ficilladaada waxay hubaashii dhibaateynayaa dadka. Malaayiin qof oo ku nool dalkan ayey saameeyeen (ficilladaada),” ayey tirdhi.
“Da’yar ahaan, dadka dib ugama istaagayaan in waxqabad la’aantan ay sii socoto”.
Isra Xirsi ayaa tidhi: “Waan sii wadi doonnaa in aan jidadka ku sugnaano illaa wax uun oo isbedel ah laga helayo xafiiskaaga (Trump). Waxaan u codeyn doonnaa in aad guuldareysato sababtoo ah waxaan u baahannahay hoggaamiye wax ka qabto dhibaatadan aan caadiga ahayn.”